Mhoro shamwari dzinodiwa. Kune mazana ezvidzidzo zveGerman pane yedu saiti. Isu takakamura izvi zvidzidzo pane chako chikumbiro. Kunyanya vazhinji veshamwari dzedu vaibvunza mibvunzo yakadai sekuti "ndechipi chidzidzo chinofanira kutanga kudzidza chiGerman kubva", "nenzira ipi yatinofanira kutevera misoro", "ndezvipi zvidzidzo zvatinofanira kutanga tadzidza".
Pamusoro peizvozvo, isu takagadzira rondedzero yevanotanga kudzidza chiGerman. Kune avo vari kungotanga kudzidza chiGerman, kunyangwe avo vasingataure chero chiGerman, ndokuti, avo vanodzidza chiGerman kubva pakutanga, nyatsoongorora runyorwa urwu.
Runyorwa urwu runofanira kudzidza sei? Vadiwa shamwari, isu takanyora inotevera misoro nekutarisa shamwari dzisingataure chero chiGerman. Kana iwe ukatevera iyi odha, iwe unozotanga kudzidza chiGerman kubva pakutanga. Tinokukurudzira kuti uverenge misoro zvakateedzana. Usasvetuke mitsara. Dzidza musoro wenyaya kwete kamwe chete asi kakawanda. Ita shuwa kuti iwe wadzidza chidzidzo chauri kuverenga zvakanaka uye usaenderere mberi kune chinotevera chinyorwa kusvikira iwe uchinge uchidzidza zvakanaka.
Chinyorwa chiri pazasi chakagadzirirwa avo vanoda kudzidza chiGerman ivo vega vasina kuenda kune chero chikoro kana kosi. Zvikoro kana emamwe makosi emitauro makosi atove nehurongwa uye kuteedzana kosi kunoitwa navo Tinokurudzira odha inotevera yevanotanga kudzidza chiGerman.
Dzakananga Zvinyorwa muchiGerman
Zvinyorwa zveGerman zvisinganzwisisike
Zvivakwa zveGerman Mazwi
ChiGerman Chizhinji, ChiGerman Chizhinji Mashoko
Mafomu eGerman eZita
Zita reGerman -i Hali Akkusativ
Sei uye kupi Kwokushandisa Zvinyorwa zveGerman
ChiGerman Was is das Mubvunzo uye Nzira dzeKupindura
Ngatidzidzei Kugadzira Chirevo cheGerman
ChiGerman Chirevo Chirevo
Nyore Chirevo Mienzaniso muchiGerman
ChiGerman Razvino Nguva - Prasens
ChiGerman Present Tense Verb Kusanganiswa
ChiGerman Present Tense Sentence Setup
ChiGerman Present Tense Sample Makodhi
ChiGermany Kutaura Kutumwa
ChiGerman Kufambidzana Makodhi
Shamwari dzinodiwa, isu tinotenda kuti kana ukatanga kudzidza zvidzidzo zvedu zveGerman nenzira yatakapa pamusoro, unenge wauya nenzira refu munguva pfupi. Mushure mekufunda misoro yakawanda kwazvo, ikozvino unogona kutarisa zvimwe zvidzidzo pane yedu saiti.
Semuenzaniso, unogona kuenderera kubva muchikamu chepakati nepamberi zvidzidzo zveGerman, kana kana iwe uchida kufambira mberi maererano nekutaura kwechiGerman, unogona kuenderera kubva muchikamu chemataurirwo eGerman maitiro anoshandiswa muhupenyu hwezuva nezuva, unogona kutarisa pamhando dzakasiyana dzehurukuro.
Kana iwe uchida, kune zvakare zvakarekodhwa uye kuverenga nyaya dzeGerman pane yedu saiti. Idzi nyaya dzakataurwa zvakanyanya kune vanotanga kudzidza chiGerman. Kuverenga kumhanya kunononoka kwazvo kunzwisisa mazwi uye isu tinotenda kuti shamwari dzinodzidza chiGerman pane imwe nhanho dzinokwanisa kunzwisisa mazwi mazhinji. Kuteerera kune aya marudzi enhau dzenyaya uye kuaverenga panguva imwe chete uku uchiteerera kunonyanya kubatsira mukuvandudza chiGerman chako.
Uye zvakare, kune akawanda mapoka pane yedu saiti senge chiGerman kudzidza kunyorera, bvunzo dzeGerman, kurovedza, zvidzidzo zveGerman odhiyo, vhidhiyo yeGerman zvidzidzo.
Sezvo paine zvakawanda zvakasiyana zvidzidzo zveGerman pane yedu saiti izvo zvatisingakwanise kunyora pano, unogona kuenderera uchidzidza chiGerman kubva kune chero chikamu mushure mekupedza runyorwa pamusoro.
# Zvidzidzo zveGerman zveVatangi
Tags: dzidza german, zvidzidzo zvega-zvechiGerman, dzidza chiGerman wega, Zvidzidzo zveGerman kubva pakutanga, zvidzidzo zvechiGerman, Zvidzidzo zveGerman zvevatangi